🥇 ▷ Bixinta ugufiican ee tusmada ✅
Bixinta ugufiican ee tusmada
40 sano MediaMarkt. Dukaameeyaha elektaroonigga ah wuxuu u dabaaldegaa sannad-guurada sannadkan anaguna – macaamiisha – waa inaan ka faa’iidaysannaa tan. Buug yaraha hadda jira * wuxuu ballan qaadayaa qiimo dhimis qaali ah oo ku saabsan qalabka iyo aaladda. GIGA waxay kuu dooratay heshiisyada ugu fiican adiga waxayna ku tijaabisay awoodooda gorgortanka.
Buug-yaraha MediaMarkt: Heshiisyada ugu wanaagsan ee qiimaha iyo hubinta teknolojiyada
Soo-bandhigyada MediaMarkt * ayaa kor u kacay Axad, 18ka Ogosto 2019 ansax ah, ama halka kaydka ugu dambeeya uu socdo. Gaarsiintu waxay badanaa ku dhacdaa iyada oo qiimahiisu yahay 4.99 euro (rarka maraakiibta ee loo maro DHL), qalabka weyn wuxuu hoos ugu dhacaa 39.90 euro oo laga qaado gudbinta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dalbatid alaabo qiimahoodu ka badan yahay 399 euro inta lagu guda jiro xayeysiinta qadka, waxaad ku keydsan doontaa kharashyada gudbinta. Bedel ahaan, waxaad sidoo kale ka qaadan kartaa dalabkaaga tooska ah dukaanka MediaMarkt si looga fogaado qiimaha dhoofinta.
Si aad u dalbato khadka tooska ah ee internetka oo aad u soo qaadato, taasi macno ayey samayn kartaa xitaa haddii ay jirto waqti dheer oo gaarsiinta. Sababtoo ah waqtiga gaarsiinta ee lagu muujiyey onlinehop-ka ayaa quseeya tan oo keliya. Laanta maxalliga ah waxay lahaan kartaa maqaalka la rabay isla markaaba – tani waxaa lagu go’aamin karaa adoo galaya lambarka boosta (“xulashada suuqa”).
1. Hadalka Bluetooth: JBL Xtreme
149 euro * halkii ay ka ahayd 299 euro
GIGA wuxuu yiri:
Robust wuxuu dhisay oo bass-xoogan yahay Boombox oo leh ilaalinta buufin, shaqada Powerbank iyo xarig
Moodh aad u qurux badan hadda qiima jaban ayaa joogsaday. Qofka bedelaya JBL Xtreme 2 (imtixaanka GIGA: 84%) wuxuu u muuqdaa xoogaa fiican oo wuxuu leeyahay heer ilaalin heer sare ah ee biyuhu biyuhu ilaali karaan, laakiin sidoo kale isagu aad ayuu qaali u yahay.
Qiimaynta heshiiska: Si aad u wanaagsan
Sida iska cad qiimaha ugufiican – sidaas oo jaban waxaad haysataa JBL Xtreme dheer oo aan mar dambe la heli doonin. Faallooyinka macaamiisha ee dukaamada internetka waa kuwo aad u fiican, waa “bangi aamin ah” oo ka dhex jira sanduuqyada Bluetooth.
2. SSD: 1TB Samsung 860 EVO (SATA, 2.5 inji)
99 yuuro * halkii ay ka ahayd 149 euro
Fantastic SATA SSD oo leh qiime adag oo aqrin leh (520 MB / s ama 550 MB / s)
Awoodda 1 TB, SSD waxay siisaa meel ku filan oo lagu keydiyo nidaamka hawlgalka, barnaamijyada, cayaaraha iyo dhammaan noocyada faylasha kale.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hadda gaarnay qiimo cusub oo taariikhi ah oo ugu wanaagsan. Si rakhiis ah ayay SSD uga timid Samsung noocii 1 TB-da runtii waligiis. Halkaan waxaad ka heli doontaa keyd ahaan deg deg ah oo qiimo wanaagsan. Nadiifi soo-jeedinta iibsiga ee Samsung 860 EVO.
3. Telefoon casri ah: Google Pixel 3a (64 GB, Just Black)
369 euro * halkii ay ka ahayd 399 euro
Google Pixel 3a waxay bixisaa kamarad cajiib ah oo loogu talagalay casriga dhex-dhexaadka ah iyo awood ka badan oo ku filan oo lagula qabsado nolol-maalmeedka (qiimeynta GIGA: 85 boqolkiiba). Xitaa soo bandhigida OLED waxaa ku deeqay soo-saarehiisa bedelkiisa pixel beddelka ah.
Sida caadiga ah aaladda pixel, tayada shaqeynta aad ayaa loo sarreeyaa, kaliya xusuusta aan la ballaarin karin ayaa furi karta dadka isticmaala qaarkood.
Qiimaynta heshiiska: Hagaag
Qiimaha ugu fiican hadda, maxaa yeelay adigu ma caban kartid. Isla mar ahaantaana, si kastaba ha noqotee, waxaan tilmaameynaa in Google Pixel 3a ay horey u iibisay 30 euro oo ka jaban. Si kastaba ha noqotee, qiimaha tafaariiqda hadda waxaad heleysaa taleefan casri ah oo adag oo leh kamarad sare.
Jid ahaan: Haddii aad doorbideyso inaad haysatid taleefanka casriga ah ee nooca “Cad Caddaan”, waxaad ku jirtaa nasiib. Amazon ayaa ku jira qiimaha waxayna bixisaa nooca dhalaalaya ee Google Pixel 3a sidoo kale waa 369 € *.
4. Robot Vacuum: ECOVACS Deebot N79T
149 euro * halkii ay ka ahayd 159 euro
ECOVACS Deebot N79T xaqiiqdi waa mid ka mid ah aaladaha heerka gelitaanka ee robots vacuum-ka, laakiin waa lagu shaqeyn karaa iyadoo la adeegsanayo app inkasta oo uu qiimo jaban yahay.
Waxqabadka nuugida iyo wadooyinka loo maro (mabda’a fowdo) ma sii wadi karo moodooyinka qaaliga ah sidaa darteedna gabi ahaan ma beddeli karaan nuugista gacanta.
Nadiifinta aasaaska ah ee aan caadiga ahayn, hase yeeshe, natiijada nuugista ayaa gabi ahaanba ku filan.
In kasta oo aqalku u iftiimin doonin mahadnaqa ECOVACS Deebot N79T, waxay hubisaa in hooyadaa aysan gacmaha kor u qaadin madaxeeda markay si lama filaan ah u soo muuqato. Iyada oo leh 149 Euro MediaMarkt waxay bixisaa aaladda waqtigan qiimaha ugu fiican, lacagta waxaad ka heli doontaa robotka nadiifka ah robotka mar labaad iyo markale ee bixinta.
1,444 euro * halkii ay ka ahayd 1,644 euro
Samsung GQ65Q70RGT wuxuu bixiyaa xitaa midabyo dhalaalaya marka loo barbar dhigo telefishanka OLED oo ay ugu mahadsan tahay teknolojiyadeeda QLED waxayna si gaar ah ugu habboon tahay qolalka aan had iyo jeer madoobaanin karin dhalaalayahooda awgeed awgeed. Laakiin heerarka madow ma sii wadi karaan kuwa TV-ga OLED.
Cabbirka shaashadda waa 65 inji, muujinta ayaa ku milmaya Ultra HD, HDR10 + taageerada ayaa sidoo kale saaran.
Qiimaha ugu dambeeya ee 1.444 yuuro ayaa lagugu soo bandhigayaa kaliya diiwaanka lacagta. Waxaa jira dhimis toos ah oo ah 200 euro halkii.
1 444 euro oo aadan waligaa ka helin TV-ga caqliga badan Samsung – tani waa qiimaha cusub ee ugu wanaagsan. Qalabka iyo isku xirxirayaashu kama baxaan wax la doonayo, midabada ayaa ka muuqda shaashadda iyadoo ay ugu wacan tahay dhalaalkeeda aad u sarreeya oo aad u qurux badan, oo leh kaliya muuqaal mugdi ah, guddigu waxay garaaceen aaladda OLED. Guud ahaan, TV weyn oo caqli badan oo qiimo adag leh.
4. Jiirka Ciyaarta: Logitech MX518
39 euro * halkii 59 yuuro
Soo celinta mid ka mid ah jiirka ciyaarta ugu caansan adduunka
Marka la barbar dhigo jiirka kale ee ciyaarta, naqshadeynta (iftiinka RGB ma jiro) iyo astaamaha waa sahlan yihiin, laakiin macluumaadka farsamada ayaa ilaa iyo hadda socda.
Nadaafadda ciyaaraha PC waxay ku raaxeysan doontaa Logitech MX518.
Logitech MX518 waa halyeey run ah oo ka dhex dhaca cayaaraha PC. Waxay u egtahay qiimaha hadda jira ee jiirka ciyaarta – kaas oo waliba halyeey ah. Tan iyo markii la daabacay, qiimaha iibintu wuxuu xasilloonaa qiyaastii 60 euro, MediaMarkt wuxuu hadda bixiyaa daabacaadda cusub markii ugu horreysay 39 euro. Weerar dhab ah oo sidaas darteed waa in si dhab ah looga maarmo PC game nostalgics, halkaasoo qaabkii hore uu u burburay ama uu leeyahay maalmihiisii ​​ugu fiicnaa.
Sidoo kale xiisaha leh: